'थुतुनो' धेरै चलाउँदा फसिन् रामकुमारी झाँक्री! जेल हाल्ने ओलीको तयारीNepalpana - Nepal's Digital Online
'थुतुनो' धेरै चलाउँदा फसिन् रामकुमारी झाँक्री! जेल हाल्ने ओलीको तयारी
Nepal Pana माघ १८ २०७७
युवा कार्यकर्ता समुन्द्र तिमिल्सिनाले भनेका छन्, 'छि कस्तो उदण्डता हो रु कस्तो अपाच्य शब्द चयन हुँन् रु यो त पुरै निन्दनीय र खारेजयोग्य शब्द छन् ! नेपाल सरकार सबैभन्दा पहिले उहाँलाई पक्रियोस् र कडा कारबाही गरियोस् ! राजनीतिक आग्रहका आधारमा ब्यक्तिगत रुपमा एउटा महिला नेताले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू प्रति गर्नु भएको कटाक्ष यती आमर्यादित कसरी हुन सक्दछ झाँक्री ज्यू?'
उनले भनेकी छन्, 'कमरेड रामकुमारी मर्यादाभित्र रहेर बोल्नुहोस । यो भन्दा बढि छि, छि र दुरगङ्गित नहुनुहोस',तपाईको नारित्वले तपाईलाई नै घृणा गर्ने अबस्थामा नपुग्नुहोस । राजनीति गर्नुहोस तर सीमा भित्र रहेर । नत्र तपाईलाई राजनीति सिकाउन सक्ने ।
आफूमाथि हुने आक्रमण नसने ओली राष्ट्रपतिमाथि आक्रमण त झन सहँदै सहँदैनन्। उनी उपयुक्त समयमा उपयुक्त बदला लिन्छन् । यस्तोमा राष्ट्रपतिमाथि जथाभावी 'थुतुनो' चलाएको भन्दै ओलीले झाँक्रीलाई नोटिसमा राख्न निर्देशन दिएका छन् । त्यसो त राष्ट्रपतिले पनि आफ्ना विरोधीलाई तह लगाएको इतिहास छ । प्रदेश ३ मा मुख्यमन्त्रीमा आफ्नी विरोधी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई तहलाई लगाएको नजिर ताजै छ । यस्तोमा सरकारले झाँक्रीमाथि उपयुक्त समयमा एक्सन लिनेगरी नोटिस गरेको छ । अब झाँक्रीले कति दिन जेलको चिसो हावा खाने हो हेर्न बाँकी छ । त्यसो त झाँक्रीले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पनि निरन्तर प्रहार गर्दै आएकी छन् । त्यसको पनि हिसाब किताब हुने नै होला ।
माघ १८, २०७७ आइतवार ०८:१९:१५ बजे : प्रकाशित